आज आईपीएलकाे फाइनल : दिल्ली र मुम्बई भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ? - २५ कार्तिक २०७७, NepalTimes
आज आईपीएलकाे फाइनल : दिल्ली र मुम्बई भिड्दै, कसले मार्ला बाजी ?
२५ कात्तिक, काठमाडाैं।
यूएईमा जारी १३औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) टी-२० क्रिकेटको फाइनल आज हुँदैछ । फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार आज राति पौने ७:४५ बजेबाट दुबईमा सुरू हुने छ ।
सविक विजेतासमेत रहेको मुम्बईले फाइनल खेल्न लागेको यो छैटौं पटक हो । यसअघि १२ औं संस्करणसम्म फाइनल पुग्न नसकेको दिल्ली पहिलो पटक फाइनल पुग्दै इतिहास रच्न सफल भएको छ ।
दोस्रो क्वालिफायरमा सनराइजर्स हैदराबादलाई पराजित गर्दै दिल्ली फाइनल पुगेको हो । पहिलो क्वालिफायरमा दिल्ली मुम्बईसँगै ५७ रनले पराजित भएको थियो ।
यसपट उपाधि जित्दै दिल्लीले अर्काे इतिहास बनाउन चाहन्छ । तर सर्वाधिक च्याम्पियन मुम्बईलाई हराउनु दिल्लीका लागि सजिलो भने पक्कै छैन । लिग चरणका दुई खेल र पहिलो क्वालिफायरमा मुम्बईले दिल्लीलाई पराजित गरेको थियाे।
पहिलो पटक आईपीएल उपाधि जित्ने हो भने दिल्लीले मुम्बईविरुद्ध तीन हारको बदला लिनुपर्नेछ । दिल्लीका लागि त्यो अवसर पनि छ ।
धवन र स्टोइनिस बाहेक ऋषव पन्त, अजिन्का रहाने र हेयतमायरले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे दिल्लीका लागि उपाधि जिताउन निर्णायक हुन सक्छ । दिल्लीमा आबद्ध नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले भने यस सिजनमा मैदान उत्रने मौका पाएका छैनन् ।